पतन को लागी सिफारिश किताबहरु: सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्षक | वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | 04/10/2021 18:02 | अद्यावधिक गरियो 14/10/2021 15:15 | लेखकहरू, किताबहरु, कथाहरू
शरद र यसको मृत पातहरु
फुटपाथमा बिखरेका पातहरु को मौसम आइपुगेको छ र वेब "पतन को लागी सिफारिश किताबहरु" संग सम्बन्धित खोजहरु बाट भरिएको छ। असल पाठकहरु जो राम्रो कथाहरु मा आफूलाई डुबाउन चाहन्छन् को बारे मा सोच्दै, किताबहरु को एक सावधानीपूर्वक चयन गरीएको छ कि कुनै संग्रह मा हराइरहेको हुनुहुन्न र त्यो बिल्कुल जाडो को लागी महिनाहरु संगै हुनेछ।
यहाँ तपाइँ कामहरु बाट पाउनुहुनेछ कि २०२१ भर मा हलचल को कारण बनेको छ, केहि को लागी जो समय संगै उनीहरुको उत्कृष्ट साजिश र सेटिंग को लागी राखिएको छ। कसरी शीर्षक फायर लाइन (२०२०), Arturo Pérez Reverte द्वारा; आधा राजा (भाँचिएको सागर I, २०२०) जो एबरक्रॉम्बी द्वारा o रातो रानी (२०१)), जुआन Gómez-Jurado द्वारा, केहि नाम गर्न।
1 मध्यरातमा (२०२१)
2 आधा राजा (2014)
4 Ickabog (२०२०)
5 लाइन अफ फायर (२०२०)
6 मोचन (२०२०)
7 रातो रानी (२०१))
यो स्पेनिश Mikel Santiago द्वारा अन्तिम उपन्यास हो; जून २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो। फेरि लेखक बास्क देश मा स्थित Illumbe को काल्पनिक शहर मा सेट एक रहस्य कहानी प्रस्तुत गर्दछ। कथानक एक अँध्यारो अतीत र एक वर्तमान को बीच मा प्रकट हुन्छ कि ती कालो दिनहरु को परिणाम बाट बच्न सक्दैन।
शनिवार अक्टोबर १,, १ 16 १ रक ब्यान्ड लस डेब्रुक - डिएगो लेटामेन्डिया र उनका साथीहरुको समूहको अन्तिम प्रदर्शन थियो। त्यो रात एक घटना द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो जसले सबैको भाग्य बदल्यो: Lorea Ie डिएगोकी प्रेमिका— ऊ हरायो। गहिरो पुलिस अनुसन्धान प्रक्रिया को बावजुद, ती युवती को ठेगाना को कुनै पत्तो भेटिएन।
बीस बर्ष पछि, डिएगो लियोन - कसले आफ्नो एकल क्यारियर पछ्याएको थियो Illumbe मा फर्कनुहोस्। फिर्ताको कारण हो बर्ट लाई बिदाइ गर्न, एक पुरानो साथी (ब्यान्ड को पूर्व सदस्य) जो एक भयानक आगो मा मरे।
अन्त्येष्टि पछि, परिचितहरु को कुराकानी को बीच, शंका उत्पन्न हुन्छ कि सायद के भयो जानबूझेर भएको थियो। यो, बारी मा, धेरै अज्ञात उठाउँछ, र सबैभन्दा चिसो को एक बर्ट को मृत्यु Lorea को बेपत्ता संग सम्बन्धित छ कि छैन।
यो जो Abercrombie द्वारा लिखित एक काल्पनिक नाटक हो Ichजस्को बाट त्रयी सुरु हुन्छ भाँचिएको सागर—। यसको मूल संस्करण 2014 मा प्रकाशित भएको थियो, जबकि यसको स्पेनिश अनुवाद एक बर्ष पछि प्रस्तुत गरीएको थियो। इतिहास Thorlby मा ठाउँ लिन्छ र गेटल्याण्ड को शासन को आसपास घुम्छ।
योद्धा पुरुषहरु को एक राज्य मा, यार्वी - राजा Uthrik— को दोस्रो छोरा अस्वीकारबाट पीडित छन् सबै आफ्नो जीवन द्वारा छ तपाइँको हात मा एक विकृति। उनको शारीरिक बाधाले उनलाई एक चर्चको रूपमा अध्ययन गर्न को लागी प्रेरित गर्दछ, पादरी आदेश को हिस्सा बन्न को लागी। तर पूरै तस्वीर परिवर्तन हुन्छ जब उसको बुबा र भाइ मारिए। त्यो दु: खद घटना को पालामा, Yarvi सिंहासन लिनु पर्छ।
El युवा अनुभवहीन राजा एक शत्रुतापूर्ण र तुच्छ वातावरण मा ठूलो जिम्मेवारी लिनु पर्छ, क्रूरता र विश्वासघात को प्रभुत्व - जो यो मुश्किल सहयोगीहरु गर्न को लागी बनाउँछ। यो कठिन परिदृश्य मा (चिह्नित र आफ्नो विकृति द्वारा सीमित), Yarvi प्रत्येक युद्ध मा सफल हुन को लागी आफ्नो ज्ञान समेकित गर्नु पर्छ।
प्रख्यात न्यूयोर्क लेखक कास मोर्गन हामीलाई एक रोचक पोस्ट apocalyptic कहानी जसमा उनी crudely मानव स्वभाव चित्रण ल्याउँछ। यो dystopia मा - आफ्नो कथाहरु भित्र एक बानी संसाधन - १०० बहिष्कारहरू निगरानी गर्न को लागी छनौट गरीन्छ कि पृथ्वी बस्न को लागी फिट छ फेरी
पृथ्वीले विनाशकारी आणविक युद्धको सामना गर्यो जसले मानव जनसंख्या को धेरै लाई नष्ट गर्यो। बर्षौ देखि, बाँचेकाहरु जहाजमा बसेका छन् त्यो अन्तरिक्षमा उड्छ विषाक्त तह माथि त्यो ग्रह वरिपरि। चालक दल मा वृद्धि को कारण, स्थिति सीमा सम्म पुग्यो: प्रावधानहरु समाप्त भएका छन्, र यसैले, सम्बन्ध तनावग्रस्त छ।
शासकहरुले पृथ्वीको अवस्था जाँच्न एउटा अन्वेषण समूह पठाउने निर्णय गरे र यदि यो सम्भव छ यो फेरि बस्न को लागी। एक सफाई को रूप मा र जनसंख्या मा "महत्वपूर्ण" घाटा बाट बच्न को लागी, यो मिशन लाई तोकिएको छ 100 किशोर अपराध। एक कठिन वंश पछि, युवाहरु आफैंलाई एक जंगली तर साँच्चै सुन्दर वातावरण मा भेट्टाउँछन्, एक सेटिंग जसमा अनुकूलन को अलावा, यदि उनीहरु बाँच्न चाहान्छन् भने उनीहरु एक साथ रहन सिक्नु पर्छ।
१०० (१०० १)
१३ बर्ष को अनुपस्थिति पछि काल्पनिक साहित्य को शैली मा - प्रकाशन पछि ह्यारी पॉटर र डेथली हलोभ्स 2007— मा, जेके रोलिंग एक नयाँ कथा संग फिर्ता। यो नाटक मा, पुरस्कार विजेता लेखक Cornucopia को भूमि मा आफ्नो पाठकहरु लाई लिन्छन् र त्यहाँ उनी एक साजिश कोर्छन् जुन "सत्य र शक्तिको दुरुपयोग" को वरिपरि घुम्छ - रोलिंग आफैं अनुसार।
लेखक जेके रोलिling।
सबै कुरा Cornucopia को राज्य मा बहुतायत र खुशी थियो। यसको नेता एक राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँका बासिन्दाहरु आफ्नो विलक्षण हात को लागी बाहिर खडा थिए; उनीहरुले प्रसन्न बनाएका छन् कि जो देशवासीहरु र आगन्तुकहरु लाई खुशी संग भरीएको छ।
तर,, त्यहाँ बाट टाढा, राज्य को उत्तर दलदल मा, स्थिति फरक थियो। एक पौराणिक कथा अनुसार बच्चाहरु लाई डराउन को लागी प्रयोग गरीन्छ, Ickabog नामक एक प्राचीन राक्षस ती भयावह स्थानहरु आबादी। अब, कथानक एक अप्रत्याशित मोडमा आउँछ जब एक दन्त्यकथा मानिन्छ भन्ने कुरा साँचो हुन थाल्छ ...
फायर लाइन (2020)
यो लेखक को अन्तिम ऐतिहासिक उपन्यास हो आर्टुरो पेरेज रिभर्टे। यो लड्ने र स्पेनी गृहयुद्ध मा आफ्नो जीवन दिएर ती सबैलाई श्रद्धांजलि दिन्छ। लेखकले एक शानदार काम गर्नुभयो जुन प्रमाणित छ कि उनी कसरी तथ्यहरुको सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण संग कथा को समायोजन गर्न सफल भए। त्यो नाटकीय समयमा भयो। बेकारमा काम आफ्नो प्रकाशन को एकै वर्ष मा आलोचक पुरस्कार प्राप्त।
यो सबै को रात मा शुरू हुन्छ आइतबार, जुलाई २४, १ 24 ३ कहिले हजारौं सैनिकहरु Castellets मा उभिएर मार्च गरे सेग्रे को। पुरुष र महिलाहरु गणतन्त्र को सेना को XI मिश्रित Bridada को थिए। अर्को दिन सुरु भयो स्पेनिश माटो मा एक bloodiest सशस्त्र टकराव को: Ebro को युद्ध.
यो स्पेनी फर्नांडो Gamboa द्वारा लिखित एक अपराध उपन्यास हो। कथानक 2028 मा एक काल्पनिक भविष्य मा वास्तविक घटनाहरु र उनीहरुको परिणाम को मिश्रण। कथा बार्सिलोना मा सेट गरीएको छ र अगस्त १,, २०१ on मा शुरू हुन्छ, जब आतंकवादी हमला लास रामब्लास मा भयो Factएक तथ्य हो कि १५ भन्दा बढी मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएका छन्।
अगस्ट मा एक दिउँसो एउटा भ्यानले मानिसहरुको समूह पठायो बार्सिलोना मा लास Ramblas मा। बाट केहि मिटर त्यहाँ युवा नूरिया बादल छन्, Who, चिच्याहट र भ्रम को बीचमा, उसलाई थाहा छ कि ऊ सबै कुरा बाट बच्न सक्छ कि भयो। समय मा सही निर्णय नगर्ने, गम्भीर परिणामहरु संग समाप्त भयो कि उसको जीवन र देश को भविष्य परिवर्तन हुनेछ।
एघार बर्ष पछि नुरिया एक पुलिस अधिकारी बनेकी छिन् एक अस्थिर बार्सिलोना को। भ्रष्टाचार, आप्रवास, कट्टरपन्थी राजनीतिज्ञ र आतंकवादले शहरलाई परिवर्तन गरेको छ। एक दर्दनाक मामला को माध्यम बाट जाने पछि, जवान महिला को जीवन एक अकल्पनीय मोड लिनेछ। त्यहाँ बाट उसले आफ्नो जीवन र सम्पूर्ण राष्ट्र लाई बचाउन को लागी धेरै चौराहा को सामना गर्नु पर्छ।
उद्धार: उपन्यास ...
रातो रानी (2018)
यो एक छ रोमाञ्चक स्पेनिश द्वारा लिखित जुआन गोमेज-जुराडो। यो उपन्यास संग, लेखक एन्टोनिया स्कट को रोमांच को बारे मा त्रयी शुरू हुन्छ। भूखंड म्याड्रिड मा सेट गरीएको छ र यो एक अन्तर्दृष्टि महिला जो एक पुलिस अधिकारी बिना महत्वपूर्ण अपराधहरु लाई हल गरीएको छ।
एन्टोनिया स्कट उनी एक परिवारको घटना पछि उसलाई एक भिक्षुमा परिणत गरे पछि Lavapiés मा उनको घर मा एक शरणार्थी हो। निरीक्षक त्यो ठाउँमा आइपुग्छन् जोन गुटेरेज; उनको मिशन म्याड्रिड मा एक नयाँ मामला स्वीकार गर्न को लागी एजेन्ट प्राप्त गर्न को लागी हो। वार्ता र अनुमोदन प्राप्त पछि, दुबै उनीहरु रहस्य, धनी पीडित र रहस्य को भूलभुलैया बाट भरिएको एक अनुसन्धान मा प्रवेश गर्छन्.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » पतन को लागी सिफारिश किताबहरु